Na avy aza ny orana : hihemotra ny taom-piotazana letisia? | NewsMada
Na avy aza ny orana : hihemotra ny taom-piotazana letisia?
Nahatsikaritra ny rehetra fa nirotsaka ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina tato anatin’ny andro vitsy. Na izany aza, tsy ampy ny rotsak’orana ho an’ny voly letisia, ka ho tara ny fahavokarany, indrindra any amin’ny faritra Atsinanana, faritra ahitana azy.
Manara-maso isaky ny tapa-bolana ny fivoaran’ny foto-kazo letisia ny fitantanam-paritry ny fampandrosoana (DDR) ao amin’ny faritra Atsinanana, miaraka amin’ny Foibe teknika momba ny zavamaniry any Toamasina (CTHT). Nilaza ny talem-paritry ny DDR Atsinanana, Rasolondraibe Ralph, fa mifanahantsahana ny tamin’ny taona 2011 ny miseho ankehitriny, tsy ampy ny rotsak’orana aty Toamasina. Araka izany, hihemotra amin’ny faran’ny volana novambra ny fisokafan’ny taom-piotazana letisia, raha novinavinaina ny tapaky ny volana novambra amin’ity taona 2017 ity.
Tonga voalohany any Eoropa
Nomarihin’ny talem- paritra DDR, fa tsy hiantraika any amin’ny kalitaon’ny letisia io fahataran’ny fotoana hahamatoy ny letisia io. Na izany aza, hisy fiantraikany any amin’ny fanondranana any ivelany, satria nahazatra ny mpanjifa any Eoropa ny fahatongavan’ny letisia avy aty Madagasikara mialoha ny faran’ny taona, sady voalohany tonga eo amin’ny tsena any Eoropa rahateo. Manodidina ny 20.000 t isan-taona ny letisia aondrantsika any ivelany amin’ireo 100.000 t vokarina.